Ku dhis laba geesood leh AutoCAD iyo Excel - Geofumadas
Nofeembar, 2007 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, topografia
Marka la dalbado qalinjabinta oo fasalka ka maqnayd, waxaan ka jawaabayaa su'aasha ku saabsan dhismaha xarumaha xajmiga badan ee AutoCAD.
Xaaladdan oo kale waxaan leenahay miis, qaybta koowaad waxaan leenahay saldhigyada, halka labaadna masaafadaha mitirta iyo sadexaadna waxa ku jira khariidadda.
Waa hagaag, waanu sii wadi doonaa inaanu dhisi doonno, ka dibna waanu xaqiijin doonaa qaladka xidhitaanka, ugu dambeynna waxaan ka wada hadli doonaa sanduuqyada.
1. Gacanta ku geli biraha iyo masaafada.
Naqshadda in AtuoCAD aqbasho inay muujiso xogta loo yaqaano isku-duwidda kutlada (fogaan iyo koorso) qaabkan soo socda:
@ masaafada <N / S grado d daqiiqado ' seken »E / W
Qiimaha @, d, ',' ayaa ah magac-bixinta kaliya ee nidaamku u baahan yahay inuu turjumo xogta
Qiimaha N / S iyo E / W waa kuwa lagu doorto mid kasta, sida Waqooyi-bari, waxaad dooran doontaa N iyo E
Qiimaha joogtada ah waa xog tiro badan, kan dambe wuxuu qaadan karaa qiimaha jajab tobanle.
Haddii qiime eber yahay waa la iska indho tiri karaa
Xaaladda, marxalad ahaan waxay noqon doontaa foomka soo socda:
guji dhibic shaashadda
...... gal inta kale ilaa saldhiga ugu dambeeya
Inkasta oo magac-u-yaalkani uu xoogaa qadiim ah yahay, haddana hadda waxaa jira macros iyo codsiyo gaar ah oo lagu soo dejiyo xogta, halyeeyada Autocad waxay doorbidaan inay ku soo galaan qaabkan dartiis dhaqan soo kordhay awgeed; marka waxaan kaa codsanayaa dulqaadkaaga, inaad ku adkeysato inaad fahanto fikradaha bilowga ah, ka dibna aad qaadatid dariiqooyin kala duwan. Sidoo kale, haddii ay ogaan lahaayeen sidaan tan ku baranay kahor intuusan webka 2.0 jirin, way fahmi lahaayeen sababta aan u doorbido inaan la wadaago intii aan ku hayn lahaa jirridda xusuusta :).
2. Gali biraha iyo masaafada ka fog Excel.
Waxaan hore u arkay galaan isuduwayaasha UTM laga bilaabo Excel, oo kaliya isticmaalaya "howl galinta", sababtoo ah waqtigan waxaan isku dayi doonaa inaanu adeegsanno isla adeeggan, iyada oo ujeedadu tahay in ay naga caawiso inaan dhisno sawirka jihooyinka iyo masaafada.
Faa'iido darrooyinka gelitaanka xogta lugta ee barta amarka 'AutoCAD' waa in qalad lagu sameeyo qiime ahaan, ka dibna la caddeeyo haddii si sax ah loo soo galay. Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loo isticmaalo Excel si loo geliyo iyaga ka dibna looga saaro AutoCAD, iyada oo aan la isticmaalin lisp ama macros.
Kani waa miis Excel oo xogta la soo dhafay.
Sidaa darteed haddii aad ku qorto xogta salka ku calaamadeysan jaalaha, habka loo fududeeyay:
Guji farriinta shaashadda
Dooro qaybta sare ee calaamadeysan ee cagaaran, nuqul (ctrl + c)
Riix barta taliska, dhejinta (ctrl + v)
Diyaar garow, baqshiinkaaga waxaa la dhisay, haddii uu furan yahay ama xogta qaar waxay u egtahay mid la yaab leh, hubi qiimaha la geliyay miiska gudubka, oo mar labaad qallajin sameeya adoo galin qiimaha kasta.
3. Hubi khaladaadka xidhitaanka
Xaaladdan, si loo xaqiijiyo qaladka xidhitaanka, waxan sameynaa waxyaabahan soo socda:
Kusoo dhawaaw barta aan bilownay, oo cabir masaafada udhaxeysa barta dhamaadka iyo barta bilowga. Tan waxaa lagu sameeyaa amarka "dist", haddii xaaladdan ay dhalinayso 0.20
Hadda waxaan u qaybinaa wareega (wadarta masaafooyinka dhan) inta u dhaxaysa kala duwanaanta. (1,017.66 / 0.20) = 5,088
Tan macnaheedu waxa weeye in saxnimadu tahay mid ka mid ah 5,000, ama hal mitir oo qalad ah 5,000 oo mitir oo toosan. Si aad u ogaato haddii la aqbali karo, waa inaad ogaataa cabirrada la aqbali karo ee deegaankaaga, guud ahaan magaalooyinka waxay ka sarreeyaan 1 saddexdii 3,000 iyo miyiga ka sarreeya 1 1,000kiiba.
Haddii qaladka xidhitaanka uu ku jiro xuduudaha, waa in aan ku khasbannaa xidhitaanka xarriijinta mid ka mid ah xariiqyada, laakin doorbidista midka ugu gaaban, si loo hubiyo in qaladka xaglaha loo adeegsado dhinaca ugu yaraan saameyn ku yeelan karto aagga Feker ahaan ... markaa waa inaad saxdaa kooraskan aan ku hagaajinnay.
Haddii qaladka xidhitaanka uu ka baxsan yahay xuduudaha, xaqiiji inaad si sax ah u soo gashay xogta, ka dibna eeg buugga beerta iyo ugu dambeyntii ... u soo diraha sahaminta dib ugu soo celinta dhulka ka dib markaad siineyso laba ka mid ah iskuulada
4. Samee miiska miisaska iyo masaafada
Well this topic waxaa ka wada xaajoon doona post kale marka aan la Civilcad, tan iyo markii ay dhacdo in this aan Excel loo isticmaalaa in lagu soo galaan dhibcood, si ay u adkayn, nuqul ka iyo paste kaliya miiska midigta ee faylka, taas oo xogta la duubay oo kaliya in la sameeyo nuqul + dhoobo.
Waxaa macquul ah in la isticmaalo dhirta gaarka ah, si loo doorto inta u dhaxaysa shirkadaha autocad, sheyga ole, sawir ama block.
Salaan oo ku aragna wakhtiga xiga.
Hadda waxay timaaddaa qaybta waxbarashada ee 2.0 Web, kaas oo macruufka ama codsiyada loo isticmaalo si uu u galo miiska sidan oo kale?
Post Previous" Hore Buugga Manifold ee Isbaanish
Post Next Ku xiridda ArcGIS Google EarthNext »
69 jawaab wuxuu u bixiyaa "Dhisid marin ku socda AutoCAD iyo Excel"
Fadlan feylka faylka u dir tifaftiraha (at) geofumadas.com si aad u falanqayso template.
Marka la eego waa in ay ahaato mid fudud, oo leh amarka qaanuunka.
Waxaan ku leeyahay qaab dhismeed joqraafiyeed miis tayo leh
cinwaan isku xirka xyz iyo xog quusin iyo dhererka qaab dhismeedka
Sideen khadka ugu heli karaa autocad.
Fikradda ayaa ah in otomatik lagu sameeyo hawshan oo aan loo baahnayn in la sawiro qaab kasta.
Hoodi, Waxaan hayaa xog ku saabsan qaab-dhismeedka juqraafiyeedka xajmiga xaashiyaha sare ee tayo leh, dhererka koorsada iyo bz waxaan rabaa inaan ku qaado AutoCAD mana garanayo sida loo sameeyo.
Waa inaan qadka ka galo AutoCAD
ALCALDIA OJOJONA isagu wuxuu leeyahay:
sida loo sameeyo si loo maro sanduuqa dhismaha laga bilaabo autocad
2015 si ay u noqoto,
Annagu kuma aanan tijaabin qaanadaha. Waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la caddeeyo sida ay u fududahay in la galo amarrada qaanso-bixinta ee xog gaar ah.
Ma taqaanaa habka lagu sawirayo foojarre (cyber) oo ay ku jiraan CIQAAL, maaha kaliya tilmaamaha? Sheeko la socota mudada gaaban, Raadiyaha, Xadhiga iyo Delta. Horeyba, mahadsanid!
Maqaalka waxaan ku cadeyneynaa inay tahay ujeedo ujeedka AutoCAD, anigoon sameyn hagaajinta dhinac kasta. Ilaa inta ay ku dhex jirto dulqaad la aqbalo.
Hello, waxaan fahamsanahay in haddii qaladka xidhitaanka uu ku jiro xuduudaha, waa in aan qadarinaa xidhitaanka baalsheelka aan ku jirin mid ka mid ah khadadka, laakiin dhammaan kuwa sameeya hantida ama dusha sare ee kor loo qaaday.
Qaybahaas waxay u baahan yihiin in si gaar ah loola dhaqmo. Xitaa safka koorsada waxaa lagu calaamadeeyay si gooni gooni ah, oo leh magaca qalooca, radius iyo xarig.
Judith isagu wuxuu leeyahay:
Su'aashaydu waxay tahay waxa dhaca marka gorgortanku hirgeliyo xarriijimo markaad ku soo dhejiso xogta RADIO ST xogta. LC, ROPE STRING AND DEFLEXION
Ma waxaad ku tilmaamaysaa kooras koonfurta-koofurta ah?
Hector isagu wuxuu leeyahay:
Hello, Waxaan ubaahanahay caawimo, waxaan leeyahay autocad 2012 mana u ogolaanayo in aan si sax ah u geliyo isuduwayaasha, diastancia @ 35.57 si fiican ayuu u aqbalaa laakiin markaan halkan imaado:
Jorge Henriquez de la Cruz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa inaan barto sida loo fahmo cinwaanka iyo masaafada Excel si loo sawiro polygon-ga autocad
Clara E Rincon isagu wuxuu leeyahay:
Maqaalkani waa mid aad u faa'iido badan, wuxuu naga caawiyaa inaan dedejino shaqada.
Fran, waa inaad iskudhafirtaa unugyada si ay u leeyihiin qaabka x, y.
Ka dibna furfuro taliska xariiqa oo ka dheji unugyada la isku dhejiyey.
Waxaa macquul ah in ay shaqeyneyso, laakiin kuma dhacayso goobta shaqada.
Isku day inaad la socoto isuduwid loo yaqaan "space coordinate".
wadataa Converti juquraafi in UTM, la Datum ka soo jeedaan isticmaalaya isbiriidhshiit Excel ah, nuqul ka iyo paste Excel UTM isuduwaha isticmaalaya AutoCAD _pline amarka aan polygonal ayaa ii muuqataa. Maxaan ku guulaysan karaa?
Waxaan ku rakiban wanaagsan Civilcad on my mashiinka, waxaana doonayaa inaan ka dhaansado geesoolayaasha a ILAA abuuray sheet excell, laakiin marka ay timaado in aad nuqulka iyo paste galay Cadno abuuraa igu barbaro laakiin i dusin unugyada excell ii caawin kartaa in aadan samayn mahad
Waa inaad u beddeshaa UTM, waayo waxaa jira barnaamijyo kala duwan iyo Faahfaahinta Excel kaas oo u beddelaya isku-duwayaasha juqraafi ahaan UTM. Waxaad u baahan doontaa tixraac Datum.
waad ku mahadsan tahay haddii aad i caawisid jawaab
hello haddii aad i caawin karto waxaan haystaa xogta darajo ahaan haddii aad iga caawin karto sidii aan ku heli lahaa autocad waxaan haystaa dhibco kasta sidoo kale tan mid ah tusaale ahaan: latitude 0 ° 13΄28.95˝S iyo dhererka 78 ° 19΄33.17˝O
barnaamijka aad soo dejisay
milu isagu wuxuu leeyahay:
hello soo qaado macluumaadka saldhigga guud ee pc iyo autocad, laakiin faahfaahinta ayaa aad ujoogeeynaya magacyada waaweynna ma garanayo sida loo sameeyo faahfaahinta mid ama sidaan sameeyo.
aynu aragno, tallaabooyin:
1 buuxi xogta lagu calaamadeeyay tiirarka sadarka «O»
2 Waxaad ku dooranaysaa xogta sadarka «O»
3 Waad dhaqaajinaysaa nuqul (ctrl + C)
4 AutoCAD-ka waxaad ku dhaqaajinaysaa khadka taliska
5 Waxaad gujisaa shaashadda si aad u tilmaamto halka laga bilaabayo
6 Waad dhaqaajinaysaa koollada (ctrl + v)
7 Waad badali kartaa amarka
waa in la dhiso garbahaaga, haddii aadan arag, soo dhawee
FERNANDO VASQUEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan runtii ku farxi lahaa haddii aan ka yimaado Honduras waxaanan soo bandhigayaa mashruucan isniinta
waan ka xumahay inaan ogaaday in aan horey u haysto miiska sidaad u heysato, laakiin ma aqaan sida ay u khuseyso sida ugu fiican.
Waxaan eegaa sawirka
Waxaan qortaa xariijinta taliska
Laakiin ma aqaan waxa aan dooranayo ama sida loo sameeyo
Hi, runtiina ma aqaan sida loo sameeyo. Way ku caawin kartaa inaad ku qorto ereyada azimuth iyo quusitaanka sawirada Google halkaasna waxaad ka heli doontaa nooc shaqo ah oo kuu geyn doona bog.
marifer isagu wuxuu leeyahay:
Waad salaaman tahay, in yar ka hor waxaan ku weydiinayay sida loo sameeyo gawaarida gawaarida, waxaan kuu soo diray miiska xogta sare laakiin waad i caawin kari weyday maxaa yeelay waad safreysay ... fiiri, horeyba waan u haystaa salka marinka, saaxiib dhisme ayaa i caawinaya laakiin waxaa jira laba xog Ma naqaano sida loo helo meesha loo yaqaan 'azimuth' ee lakabyada iyo lakabyada lakabyada, wuu garanayaa sida loo maareeyo barnaamijka oo wuxuu u maray marin la'aanta xogtan laakiin sidee baan ugu qaban karnaa inaan ku darno xogtaan
Eeg miiska xogta ee aan helo
laga bilaabo: tope1
lakabka dip az: 70
lakabka lakabka: 42
iyo sidoo kale macluumaad kale
Waad ku mahadsan tahay, haddii aad ku jirto jimicsi, waan kuu soo diri doonaa.
Hagaag, waxaan u maleynayaa inaad ogaan karto qaabka sahanka ay u isticmaaleen, waxay umuuqatay inay tahay isku dhafka 'theodolite' iyo joogitaan ama sahamin cimiloolajiyeed. Ma ku haysaa taas faylka Excel ama keliya buugga xusuusinta?
Haddii aad heysato, u dir boostada oo fiirso.
iyo sidoo kale xogta kale ma haysto wax fikrad ah sida loo sameeyo tikidhada marka aan bilaabo
Hada, waa inaan sameeyaa foojignaan leh xogta soo socota mana ogi sida loo sameeyo
-Waxaa loo yaqaan 'profile' in jpg ama pdf (oo leh cabbir) iyo faylka asalka ah ee asalka ah (autocad, corel ama canvas)
laga soo bilaabo fogaan fog ee Az of the course az of buza-buzami
ee lakabyada ayaa jiifsan lakabyada lakabyada
oo waxay i siiyaan tiirarkii hore
daadinta isagu wuxuu leeyahay:
wanaag fiican ayaan ku fadhiyaa golaha
tani waa su'aalahayga
Aan ku sameeyey baadhitaan goob ka mid ah jidka laakiin waxaan hor dhigay polygonal ah, waxaa jiray qalad laakiin weli xalaal in isaga hadda magdhow sida polygonal hore u da'ada yar waa in aad la magdhawo sida sibidhka iyo bir mahad
calaamadaha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay cartoonist. 2000 isticmaali autocad dhismaha geesoolayaashu in diyaarado cartografía.Me tagnay waalan markuu ahaa quruxsan Poligono complicado..Con this waxaan uga jeednaa isticmaalaya wadataa horjeeda in ay galaan masaafo adag iyo xaglaha, ilaa ay ii shiday laydh; Kaliya waxaan go'aansaday inaan galo qodobbada iskudhafka, tan iyo khadadka xarriiqa waxaa sameeya 2 dhibcaha booska (si loo cafiyo caddaynta). Marka dhibcaha ay ku yaalaan, waxa kaliya ee aan sameeyo waa inay ku biiraan polyvin iyo taasi waa! Waxaan rajaynayaa in ay kaa caawinaysaa in ..
waayo shaki iigeyga ka tagay boosteejeyga si aan u bedelo qaababka sawirada:
Daabacaadda waa mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee AutoCAD, mabda'a waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo in aad naftaada ku barato daabacaadda qaabka oo aan ka ahayn qaabka.
Sawirka waxaa loo dhisay in lagu cabbiro 1: 1, u malay in cutubku yahay hal mitir. Cabirku wuxuu ku eg yahay cabirka warqad.
Ku samee xaashi le'eg xaashida 1: 100, taas oo macnaheedu yahay in hal sentimitir uu la mid noqon doono 100 sentimitir. Markaa haddii xaashidaadu tahay 8.5 ″ x 11 ″ u beddel sintimitir, waxay macnaheedu noqonaysaa in qaabkaaga uu cabbirayo 21 mitir 28 mitir, ka dibna ka saar qiyaastii laba dhinac oo dhinac ah dhinaca daabacaadda waxaadna lahaan doontaa xaashi la dhisay 1: 100 .
Ka dib haddii sawirkaaga xaashidan aanu ku habooneyn, raadso arrin, sida ku haboon, tusaale ahaan labalaab cabbirka wuxuu noqonayaa 1: 200 iyo badhkeedna wuxuu noqonayaa 1: 50
Ka dibna isku day inaad daabacato inaad fahamto xirfadaha looga baahan yahay in la fahmo cabbirka daabacaadda.
Haddii aad ugu danbeyn sameyso, markaa waxaad madaxaaga jebin kartaa qaabka, kaas oo u baahan shuruudo kale oo qiyaas ah.
hecsal isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan rabaa inaan sameyo su'aalahan soo socda, inkastoo aanan ogeyn haddii ay ku jiraan forumkan waxaad iga caawin kartaa arrintan.
Waxay ku saabsan tahay sida loo siiyo miisaan si sawir loogu daabaco. labadaba moodeelka, sida laga soo xigtay qaabka (iyadoo lala eegayo).
Ka hor inta aanan rabin inaan sheego shaki ama fikrado ku saabsan mowduucan.
1 Waxaan booqday dhowr goobood, forumyo, bogag, iwm. iyada oo la tashaneysa mawduucan iyo sida kala duwan oo kala duwani ay yihiin sharraxaadaha iyo jawaabaha aan ka helay iyaga; laga bilaabo xalal sahlan oo la fahmi karo, jawaabo fiican oo loo qoondeeyey iyo jawaabo talaabo tallaabo ah, iyo sidoo kale jawaabaha halkii ay ka caawin lahaayeen inay isku kalsoonaadaan, iwm.
Jawaabyo kooban oo kooban laakiin la soo koobay sharaxaad ka badan ama ka yar isku mid ah: Habka loo raaco si loo siiyo miisaanka.
Haddii aad rabto inaad bixiso 1: Miisaanka 100, sii wad sida soo socota:
1 / 100xp haddii qaybaha cabbiraadda sawirku ay ku jiraan mm.
100 / 100xp haddii ay ku jiraan cm
1000 / 100xp haddii ay ku jiraan mt.
Waxaa loo qoray sida tan, ama cilladeeda xogta ka mid ah qaybta mid kasta oo ka mid ah kiisaska iyo miisaanka su'aasha ayaa la calaameeyay.
Tani sax ma tahay?
nidaam isku mid ah ayaa loo raacayaa cabir kasta oo aad rabto inaad isticmaasho: 1: 25,1: 200,1: 75, iwm.
2. Waxaan fahamsanahay in daabacaadda sawiradu ay ku soo baxayso miisaanka ama miisaanka (haddii ay yihiin sawirro dhowr ah), oo aan go'aaminnay; Dhamaan diyaaradaha waa in lagu sawiro 1: 1 (qaabka), taas oo ah in la yiraahdo waa in aan qeexnaa ka hor inta aan la sameynin sawir ku saabsan qaybaha qiyaasta aanu u shaqaynayno waa mm, cm ama mts. tani macnaheedu waa in cabbiraadda cabbiraadda ee aan go'aamineyno shaqadu waa inay ka dhigan tahay sawir-qaadista cabirta dhabta ah ee shayga si loo qaado. Ex. Haddii aan leenahay miis leh dusha sare ee 1 mt. x 1 mt. sawirku wuxuu ku xiran yahay qaybta la doortay ee cabbirka waa in la sameeyaa sida soo socota:
- Sawir laba jibbaaran 1 x 1 haddii aan ku shaqeyno mitirro.
- Sawir laba jibbaaran 100 x 100 haddii aan ka shaqeyno cm.
- Sawir jibbaara 1000 x 1000 haddii aan ku shaqeyno mm.
Sharaxaadkan sax ma tahay? Waxaan ku weydiinayaa sababtoo ah waxaan ogsoonahay in Autcad uu u shaqeynayo mug leh, hase yeeshee waxaad bedeli kartaa cutubyada aad rabto inaad isticmaasho.
3-Kadib su’aashaydu way kacaysaa maxaa yeelay hadaan rabo inaan ka shaqeeyo mts. ama unug kasta oo cabir ah, waxaa lagama maarmaan ah in unugyada loo beddelo mts. ama waxay u shaqaysaa sidii lagu qeexay barnaamijka (mm); waxaana loo malaynayaa in marka la sawirayo «X» ay ka soo horjeeddo qiyaasaha qofku bixiyo uu noqonayo cutubyada qofku doonayo in sawirkaasi lahaado. (mid mt cm, iwm.)
Wuxuu oran jiray ereyo kale oo la yiraahdo ej. shaxda 1 mt x 1 mt
Haddii aan ogaado in Autocad ay la shaqeyneyso mm. laakiin waxaan rabaa sawirkayga mt.
- Bedelida qaybaha cabbirka ilaa mitir? ama
-Waxaan ka tagaa sidan oo aan miiskeyga ku sawirayaa cabbiraadyada 1 x 1 taas oo ogaaneysa in kastoo Autocad uu ku jiro mm. sawirka aan samynayaa wuxuu noqon doonaa
Ma fahamsan tahay shaki iigu ah, waxaan rajeynayaa sidaas.
4-All of kor ku xusan waxa ay soo bandhigaan maxaa yeelay, waan ku dhici in ay leeyihiin dhowr sawiro muujinaya xaalad, furitaanka file unugyada barnaamijka waa in mm. laakiin cabbiraadda sawiradu waa mitir. iyo mid kale oo ka mid ah qaybaha barnaamijka ay ku jiraan. iyo cabbiraadda sawirku sidoo kale waa mitir. laakiin marka la siiyo qiyaasta ee khariidad tusaale 1 ah: 50, 1: 75 waxaan u sameeya sidii aan kor ku Caddaynay (taas oo ah sida aan ka helay meelo kala duwan ee aan arko), laakiin ma aha.
Cabbirka sawirka wuxuu ku xiran yahay xajmiga waraaqda waxaana la aaminsan yahay in marka sawirku hore u socdo qiyaasta loo baahan yahay waa in uu ku haboonaado aragtida iyo waxa soo baxaya in midkood uu aad u yaryahay ama uu ka baxayo daaqada.
Maxaa dhici kara kiiskan?
Waa hagaag, kuwaas oo asal ahaan yihiin su'aalaha aan qabo oo ku saabsan mawduuca, waxaan rajeyneynaa inaadan caajisaan, wareeriyay, iyo gaar ahaan ka xumahay sababtoo ah waxaan kordhiyay waqtiga i qabtay ayuu sidoo kale waxaan qabaa, ka gees ilaa xad ah, waxaan rajeynayaa in aan ku jirey oo cad oo ku filan.
Haddii aad caddayn karto shaki ama inaad ogaatid qaar ka mid ah xayawaanka, ama goobta laga yaabo in ay ka jawaabi karto, waxay noqon laheyd mid xaqiiqo ah oo ku faraxsan.
Dhibaato ma jirto, waa inaan dalbano
Taasi waa xaq, Geesooleyaasha, Waxaan sidoo kale qabaa waa in ay lahaato inta kale ee wadataa ah, dhibaatada waa in macluumaadka aan u sheegto ama meesha aan ka heli kartaa inta kale ee xogta ka kooban yahay oo kaliya wadataa labo dhibcood, iyo masaafo of qaybaha ka. sida aan soo sheegnay.
Si kastaba ha ahaatee, aad ayaan ugu mahadnaqayaa jawaabta, sababta oo ah shaki ayaa u ahaa inuu si cad u qeexay iyo in kale aanad ku barbaarin kareynin xogtaas.
Sidaas awgeed aad baad u mahadsantihiin, waxaanan rajaynayaa inaanan ku dhibin haddii aan mar kale kugula taliyo wax kale.
Aan aragno haddii aan fahmay:
Waxaad lee-dahay siyaasad, laakiin waxaad haysataa iskuxirida labo saldhig (waxaan u maleynayaa in garsooruhu leeyahay wax badan)
Ma lihid jihooyinka nasashada, masaafada kaliya.
Maya, suurtagal ma aha in aad dhisto, waxaad ku jirtaa dhammaan iskudhafyada ama aad leedahay jihooyin iyo masaafo.
Hello, waxaan rabaa in aan sameeyo su'aalahan soo socda, miyaad ka dhigi kartaa figrad ah autocad oo laga bilaabo kaliya labo iskudhaf oo xarun kasta ah? iyo haddii aad sameyn kartid waxa nidaamku raacayo.
Maadaama dhibaatada aan haysto ay tahay tan soo socota: Waa inaan sawiraa tiro badan oo ah "x" tiro saldhigyo ah; laakiin macluumaadka kaliya ee aan hayaa waa sawir yar oo ah polygon kaas oo leh kaliya silsiladaha "X" iyo "Y" labada saldhigba, iyo masaafada u dhexeysa qaybaha ama qaybaha ay ka kooban tahay. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan jihooyinka, azimuth ama wax la mid ah. Sidaa darteed su'aashu waa sida aan ugu sheegay bilowga haddii sawirka lagu sameyn karo kaliya macluumaadkaas.
Aad ayaan ugu mahadcelinayaa jawaabta.
orlando euan euan isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rajeynayaa inaad iigu jawaabto, fiiri miiska dhismaha, madaniga ayaa si toos ah ii siiya, laakiin ma heli karo hab aad ku sii wado.
hectorrrrrr isagu wuxuu leeyahay:
Ma fahmi karo naahh tusaalahaaga oo kaa maqan onnnnnnn haddii aad wax qabanaysid si sax ah u yeel….
gargaar aad u fiican, mahadsanid, aad i badbaadisay, maxaa yeelay, waxaan ahay barbaro geesoolayaasha ah 38 saldhigyada, xaglaha ama geesaha iyo ma uu ogayn sida ay awoodaan in ay xirto.
Waxaan akhriyay dhammaanba nidaamyada kala duwan sida: xiritaanka xagasha, xidhitaanka toosan, iwm. (iyada oo qaababkeeda oo dhan), laakiin waxa aan u baahday ayaa ahaa xal fara badan. sida aad i siisay.
Markaa mar labaad aad ayaan kuugu mahadnaqayaa oo laga yaabaa inaad goor dambe sharaxaad ku sharixi karto tusaale si ay u diiwaangashan tahay, oo aan ugu adeegi karo kuwa kale oo laga yaabo inay isla shakiga iga qabaan.
Hagaag, Waan fahamsanahay shakigaaga, waxaan u baxaa fasax aad u balaaran mana fuuli doono qalabkayga culus. Waxaan kuugu macnayn doonaa hawada dhexdeeda.
Waxaad leedahay polygon min barta 1 ilaa barta 50. Waxay dhacdaa in inta u dhaxaysa barta 1 iyo 50 inaad haysato xariijin xariijin toosan oo 30 ah, laakiin barta 50 iyo 1 waa inay ahaadaan isku mid.
Sidaas daraaddeed waxaad ogaatay in line ugu gaaban waa dhexeeya dhibcood 35 iyo 36, si aad u qaadato oo dhan khadadka ka barta 35 50 in, iyo guuraan.
Immisaad u dhaqaajinaysaa? ka dibna laga bilaabo barta 50 illaa barta 1, amar wareejinta, barta asalka ah ee 50, barta bartilmaameedka 50. Sidan, polygon-gaagu wuu xiran yahay dhamaadka, laakiin wuxuu ka furmay barta 35
Marka waxaad qaadataa dhamaadka qodobkaas waxaadna ugu dhaqaaqdaa barta 35. Waxay macnaheedu tahay inaad bedeshay dariiqa iyo fogaanta qeybta '35-36', laakiin hubinta in aaggu uu ku saameyn doono sida ugu macquulsan sababtoo ah waa kan ugu gaaban.
Waaye, sidee tahay Aad ayaan ugu mahad naqayaa kaalmadaada qiimaha badan, hase yeeshe ma jecli inaan u muuqdo qof ku adkeysanaaya; laakiin si buuxda uma fahmin qaybta ugu dambeysa ee sharraxaaddaada meesha aad ka tidhaahdo:
1.- «waxaad u dhaqaaqaysaa qeybta kore ee xariiqda (waxaan u maleynayaa inaad ula jeedo polygon dhan) adoo u qaadanaya meesha ugu dambeysa asalka iyo barta bilowga sida meesha la aadayo».
marka loo eego tilmaamahan waxaad ku sheegaysaa in furitaanka uu u guuri doono qaybta ugu gaaban. laakiin ma fahmi karo sida tani u dhacdo.
Isbeddelka aad ku sheegeyso inaad tahay inaad ku sameyso xayawaanka, Waxaan ku maleynayaa inaad leedahay koorso cusub ee qaybta gaaban?
Haddii ay tahay wax badan oo dhib ah waxaan noqon lahaa mid aad u mahadcelin haddii aad caddayn karto shaki.
Waxaad u maleyneysaa in lagu sharxi karo tusaale ahaan sawir, fadlan
Marka polygonal xiran (ee 2D), dhamaadka uguma xirna, waxaa macquul ah helitaanka labo qalad:
Cilad ba'an iyo qalad toosan oo toosan. Qaybtaas u dhaxaysa barta bilowga iyo barta bilowga waa natiijada khaladaadkaas. Ficil ahaan had iyo jeer waxaa jiri doona qalad maxaa yeelay xaglaha aan ku qaadno garoonka had iyo jeer waa wareegsan yihiin, waxaan ula jeedaa in kasta oo aan adeegsaneynno ilbidhiqsiyo, xagashaas had iyo jeer waxay lahaan jireen dhowr jajab tobanle oo kooxdeena togoogga ah ay nagu qasbeyso inaan wareejino oo natiijada ka dhalata, aakhirka marwalba waxaa jiri doona a qalad
Low mabaadi'da aasaasiga ee fasalka topography, qaladkan waa in dib loogu qeybiyo dhammaan dhinacyada iyadoo loo eegayo weynaanteeda tan tanna waxaa jira habraac dhan oo ay tahay inaad ogaato adigoo qaadanaya buugga topography. Markasta oo laga bilaabo dulqaad la aqbali karo, markii aan ku sameynay xisaabiyaha saafiga ah, waxaan sameynay safarro aad u badan illaa qaladkaas la aqbali karo oo hadda xaqiiqdi inay jiraan habab joogto ah oo loo sameeyo ama barnaamijyo si toos ah u fuliya.
Waxyaabaha qaarkood ayaa ah, in dhamaadka, midka dhameystiran ee loo yaqaan 'polygonal' oo buuxa lagu beddelo qiyamyo aad u yar si markaa qaladka loo qaybiyo dhammaan qaybaha gorgortan.
Waxa aan tusay waa hab wax ku ool ah oo lagu xidho polygon, marka hore tixgelinta, in ay tahay "dib-u-dhiska" polygon horeba loo hagaajin lahaa. Waa wax ka badan falsafadle sawir-qaade ah marka loo eego sahamiye u maleeya, in haddii aad u qeybsato wareegga polygon inta u dhaxaysa qaladka xariiqda wuxuu ku siinayaa saami saxan, taas oo ah, dhowr mitir toosan oo mitir qalad ah ayaa la galay iyo haddii ay aad u yar tahay (ama gudaha gudaheeda) of dulqaad) waxaad u xiri kartaa geesiga.
Waxaase laga doonayaa in saxnimada waa beegyada uu aqbalay gudahood, waxa aad samayn waa in la ogaado kooxda ugu gaaban, oo ka guurto oo dhan khadadka qeybta qaadashada sida asal ahaan dhibic dhammaadka goor wanaagsan oo bar bilow u socoto (qeybta aperture ah) ah, this ka dhigi lahaa hadda faleebo ayaa u dhaqaaqay qaybta ugu gaaban ka dibna xiro brava iyadoo la baddalayo mid ka mid ah qodobbada qaybta gaaban.
Waxaan shaki ku qabaa: Haddii polygon laga soo qaaday dariiq bir ah iyo masaafooyin uusan xirmin (sida tusaalaha aad soo bandhigtay); Sidee loo sameeyaa sixitaanka "qaladka xiritaanka"? Si loo xidho.
Waxaan sameeyaa weydiinta sababta oo ah tusaalaha aad wadaagtaan, waxaad ku sharraxeysa waxa loo baahan yahay in la qabto laakiin ma aha sida loo sameeyo. Waxaa laga yaabaa inaad sidaas igu caawin karto sidaas, sababtoo ah waxaan si buuxda u fahamsanahay waxa ay tahay in la sameeyo laakiin ma ahan sida loo sameeyo.
Waxaan ka akhriyay baraha kale (iyo sida ay u cad in aan loo cadeynin sida wax loo qabto) oo ku saabsan "magdhow toos ah" (oo lagu dabaqey xagasha gudaha ee polygon) iyo "magdhow toos ah", si aan u saxo khaladaadka xiritaanka, laakiin anigu garan maayo inay lamid tahay waxaad la mid tahay waxaad ula jeedo, maadaama aad ku xuso inaad ku qasbeyso xiritaanka polygon mid ka mid ah xariiqihiisa iyo saxda jihada ay saameysay.
Marka la soo koobo, waxaan jeclaan lahaa sharaxaad macquul ah oo la fahmi karo oo ku saabsan sida loo sameeyo sixitaankan, isagoo aasaaska u ah koorsada iyo shaxda masaafada.
Waxaan rajeynayaa inaan sharxay. waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto.
Salaan aad u weyn iyo hambalyo u ah deeqaha aadka u wanaagsan.
Taas waxaa lagu samayn karaa khariidadda 'AutocAD Map' ama Muuqaal 3D. Waxaan u maleynayaa nooca caadiga ah ee AutoCAD inuusan laheyn shaqo aasaasiga ah kan oo kale.
Hal mar waxaan ka hadlayaa sidan oo kale AutoCAD 14 iyo Softdesk 8 halkaa waxaa ku jira faallooyin waxaa jira qadar.
Batman isagu wuxuu leeyahay:
Su'aashaydu waa tan:
ka dib markii ay barbaro geesoolayaasha la jihada iyo masaafada, waxaan u baahan dhoofiyaan wadataa of dhibcood oo dhan AutoCad in Excel ama barnaamij kasta, si aad edit karo iyo waxa soo bandhigaan sida warbixin ku miis halkii garaaf ee AutoCad.
Fulanito Detal isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, waxaan doonayaa in aan ogaado haddii aad iga caawin kartid waxyaabaha soo socda:
Waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbiyo macluumaadka ku jira qolka in excel (tusaale ahaan abc), si toos ah khadka taliska otomaatiga. Ka taxaddar adiga oo aan u baahnayn Ctrl + C iyo Ctrl + V… taas oo ah, isku xidhka unuggaasi waa mid otomaatig ah iyo in AutoCAD ay ogtahay in macluumaadka la sheegay uu si toos ah ugu socdo khadka amarka AutoCAD. Isaga oo aan ka badnayn tixraac isla markaana kaa sugaya caawimaad deg deg ah adiga, ayuu macasalaamayaa
Waxaan ku dhaqmay jimicsi ah dhisida laba geesinle miis laga sameeyay Excel, kaliya waa inaan bedelaa wicitaanada barta iyo W ee O ..., oo waxay ku soo baxday si qumman, sidoo kale waxaan ku tababbaray dhibcaha ama iskuduwaha oo waxaan si fiican u qaatay autocad, waxay ahayd mid qumman ... aad ayaan ugu mahadcelinayaa wax ku biirintaada.
Salaan ka timid Paraguay
marita isagu wuxuu leeyahay:
iyagu waa ugu badnaan .. way gudbeen ... .. wax badan ayey i caawiyeen
Dhamaan dadka oo dhan
Iskuday midka ugu horreeya si aad u sameysid gees-galka ku jira tusaalaha, oo ii sheeg haddii aad isku mid tahay
Waad saxantahay, ma jiro tiir cagaaran. Waa inaad nuqul ka sameysataa sadarka «O» isla marka aad taabato barta farta, oo aad ku meeleysatid qodobka koowaad ee asalka jiirka.
hey aan la 2006 autocad shaqeeyaan, iyo marka aan nuqul ka iyo xogta Jinka miiska Excel waan ka sameeyaan geesoolayaasha laakiin khadadka waa out of si, oo waxba ma q arki q muuqataa geesoolayaasha ah, waxaan sameyn doono wax qalad ah in la bilaabo q waa waxa aan u baahnahay in aan nuquliyo oo aan dhumiyo q Ma arko wax cagaar ah oo ku qoran xaashida.
mmm, waxaan u maleynayaa inaad sax tahay, waxaan miiska la cusbooneysiin doonaa meelo badan oo xog ah
WAXYAABAHA WAXA LAGU QAADO
berjimon isagu wuxuu leeyahay:
Way fiicnaan laheyd, waan hubaa inaan ka xumahay….
maya, maxaa yeelay xagashadu waa in la isku hagaajiyaa, maxaa yeelay xaglaha waa in ay hal dhinac u leexiyaan dhanka waqooyiga.
waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah maalmahaas kor loo qaado ujeedooyinkaas.
salaanta dhamaantood, sawirkan cajiibka ah waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa macluumaadka ku yaalla azimuth ?????
Waxaan ku faraxsanahay autocad, waa mid aad u xiiso leh sida loo isticmaalo qalabkaas tan iyo markii ay fududeeyeen waqtiga.
marka la eego tusaalaha ka mid ah dhacdooyinka, gudbinta xogta jaantuska (fogaanta)
Mahadsanid Prudy, ma waxaad ka hadlaysaa qodobkan ama mid kale?
waxaa jira qayb yar oo furan, marka taa la eego, khaladka ay sabab u tahay isku-darka ilbidhiqyada, oo taasna waxaan ula jeedaa khaladaadka xiritaanka
haddii aad ka shaqeyneysid geesoole kale, waxaad yeelan kartaa qalad xiran oo weyn, ama xog aad ku helayso qalad, oo ku siinaysa aragti ah inaad ka maqan tahay dhinac
Prudy Fortuna isagu wuxuu leeyahay:
Marka aan dhiso maskaxaha waxaan mar walba seegayaa fidinta ugu dambeysa
Good Diego, waxaa jira template iyo sharaxaadda sida loo abuuro loona isticmaalo.
Hagaag, meeshaas kama helin macro, laakiin waxaa lagu dhisi karaa Excel ... waxay igu qaadan doontaa xoogaa fasax ah laakiin waxaan u maleynayaa inay noqon doonto mid xiiso leh.
Haddii carruurtu ku qubeystaan ​​barkadda dabadeedna daalaan hurdo, waxaa laga yaabaa inay i siiyaan wakhti galabtii.
Hello Diego, salaan u ah dadka Paraguay.
Hagaag, waxaa jira habab badan oo tirinta lo'da. Ka biloowga tirinta geesaha isla markaana u kala goosa laba, adoo tirinta lugaha una kala gooya afar, ama si toos ah u tirinta lo'da.
Ugu fudud: waa inaad isticmaashaa AutoCAD Maqaarka 3D ama Softdesk sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad tagto ikhtiyaarka horayba u yimid taas, kaas oo aad dooran kartid barta asalka iyo si toos ah u sameyso miiska.
Kiiska kale waa in la sameeyo tartanka (Microstation), oo leh codsi Visual Basic sida lagu muujiyay boostadan.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad u sameyso sida aad u dhigeyso, waxa kaliya ee aan u arko wax yar ee murugsan waa inaan dhoofinta xogta si ugu fiicnaado oo aan u aadno sida aan u rabno. Laakiin waqti i sii si aan gurigayga ugu laabto, maxaa yeelay maanta ciidda ciidaha waxay ka bilaabmaysaa meelahan waxayna kala badh iga rabeen.
Diego D. isagu wuxuu leeyahay:
waxaan ku faraxsanahay inaan ku salaamo Don Alvarez, marar hore baaritaan ah in aan imid aniga oo aan rabin websaydiisana waxaan u muuqday mid aad u xiiso badan, labadaba tartanka iyo habka wanaagsan ee uu ula xiriiri karo sayniska.
Waxaan jeclaan lahaa in aad weydiisato haddii aad ogtahay script qaar ka mid ah, ama qayb ka mid qaar ka mid ah Excel si ay u caawiyaan i sameeyo waxa soo socda: waxaan si digital ah ee CAD geesoolayaasha leh geesaha dhibco cad loo tilmaamay, iyo UTM kala isuduwaha. Waxaan si fiican u dhoofin karaa iyaga si ay ugu akhriyaan iyaga ku wanaagsan.
su'aashayda: anigoo og xogta UTM ee dhibcaha 1… N, suurtagal ma tahay in la helo xogta saldhigyada, jiirarka iyo masaafada?
taasi waa in la yiraahdo, xogta aan bixiyay, dhibic 1 waxay leedahay X… Y…, oo ogaanshaha bartaas 2 waxay leedahay X… Y…; MA II SHEEGI KARTAA FARQIGA UU KALA TAGO IYO XAGALKA AY LEEDAHAY? si si toos ah loogu diyaariyo xaashiyaha u dhigma?
Waad ku mahadsan tahay macalinka illaa hadda
Wanaagsan ee laga helo Paraguay!